lundi, 01 avril 2019 19:21
Mpiasa nampodiana avy any Koweit: Tsy nisy naiditra Hopitaly rehefa nozahana ara-pahasalamana
Niatrana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny sabotsy 30 martsa teo, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, nahitana ireo « Spécialistes » avy amin’ ny hopitaly lehibe eto an-drenivohitra handray an-tanana ny fizahana ara-pahasalamana ireo vehivavy Malagasy nijaly tany ampilana ravinahitra any Koweit ka nampodiana an-tanindrazana.
Nisy 46 ny andiany voalohany tonga, raha tsy misy ny fiovana dia rahampiso talata 2 aprily ny andiany manaraka.
Nilamina ny fandraisana an-tanana teo amin’ny fizaham-pahasalamana ka hita fa nisy tokoa ireo niharan’ny herisetra isan-karazany ka mila fanaraha-maso akaiky ary natoby amina toerana efa voaomana ho an’izany.
lundi, 01 avril 2019 18:55
Europe: Vers la fin de changement d'heure
La nuit du samedi à dimanche, hier La France a basculé à l'heure d'été.
Le décalage entre Madagascar et la France est de 1heure.
(18h30 à Madagascar, 17h30 en France).
Le parlement européen a voté pour la fin de ce système de changement d'heure en été et en hiver à partir de 2021.
lundi, 01 avril 2019 13:21
Toamasina: Nizara fanafody famonoana bibikely sy kongona i Irmah Naharimamy
Taorian'ny fanadiovana ireo faritra maloto eto an-tampotanan'ny Toamasina, dia nizara fanafody mamono bibikely sy kongona, manerana ny fokontany 138 ny kandida ho Solombavambahoanka, avy amin'ny vondrona « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina », Irmah Naharimamy.
Namafisiny tamin'izany ny fanentanana ny rehetra hitandro isan'andro ny fahadiovana, izay mitondra fahasalamana, no manatsara endrika ny tanàna.
lundi, 01 avril 2019 12:57
Tsihombe: Mirotsaka manara-maso ny fanaovana asa i Masy Goulamaly
Mandratra, ary mampidi-doza mihitsy ity tetezana eto amin'ny lalam-pirenena faha 10 eto antampo-tanànan'ny Tsihombe ity.
Asa efa natomboka tamin'ny naha depiote teo aloha an'i Masy Goulamaly ity fotodrafitrasa ity, ary izy mihitsy no nirotsaka manara-maso ny famitana ny asa, ametahana arofanina izay nisy naka teo aloha.
Efa vita tanteraka moa izao ny asa.
Tonga nitsidika ity lehilahy nianjera avy eny ambony tetezana ity moa izy, ary nankahery azy.
Efa salama tsara izy izao.
Masy Goulamaly moa dia kandida tsy miankina ho Solombavambahoaka eto Tsihombe, hanoy ireo ezaka rehetra efa nataony, tamin'ny naha depiote azy teo aloha.
lundi, 01 avril 2019 12:55
Andry Rajoelina: Hanotrona an’i Macky Sall any Sénégal
Any Sénégal hatry ny omaly alahady 31 martsa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Hanome voninahitra ny lanonam-panjakana hanaovan’i Macky Sall fihanianana, taorian’ny nahavoafidy azy fanindroany ho filohan’i Sénégal i Andry Rajoelina.
Nahazo fanasana manokana hanome voninahitra ny fetim-pirenenan’i Sénegal ny 4 aprily ho avy izao ihany koa i Andry Rajoelina, izay filoham-pirenena zandriolona indrindra amin'ireo amperinasa aty Afrika.
Nitsena ny fahatongavan’i Andry Rajoelina teny amin’ny seranam-piaramanidina, Leopold Sédar Senghor, ny filoha senegaley Macky Sall.
Fiaramanidina, mitondra ny laharana any Turquie (TC-TSR) no nitondra ny delegasiona malagasy tonga tany Sénégal.
Antalaha: Tagnamaro seranam-piaramanidina
Famaliana ny antso nataon'ny avy amin'ny ministeran'ny Serasera sy ny Kolotsaina, dia nanatanteraka ny adidiny ireo mpiasa eo anivon'ny seranam-piaramanidina eto Antalaha, nanadio ny manodidina, sy ny lalana mihazo an'izany toerana izany.
Velon-taraina moa ny mponina aty andrenivohitry ny lavanila fa tsy misy sidina avy amin'ny Air Madagasikara na ny Tsaradia, fa ireo fiaramanidina hofain'olon-tokana ihany no midina eto Antalaha, nefa tsy mena mitaha amin'ny seranana hafa aty amin'ny faritra ny misy eto an-toerana.
Hanamarihana ny 30 taona nilomanosan’ny Tarika REBIKA tao anatin’ny habaky ny kanto ity rakikira vaovao be ity. Anatin’ny fanomanana azy io ny tarika amin’izao, ary hivoaka tsy ho ela ho an’ny mpankafy.
lundi, 01 avril 2019 09:31
Fanabeazana: Ireo datin’ny fanadinam-panjakana
CEPE : 27 aogositra 2019
BEPC : 9 hatramin’ny 12 septambra 2019
Bakalôrea : manomboka 30 septambra 2019.
Mifarana amin’ny 3 mey 2019 ny fandraisana ny fisoratanana ho an’ny CEPE, hifarana amin’ny 19 aprily 2019 kosa ho an’ny BEPC.
lundi, 01 avril 2019 09:26
Boriboritany faharoa: Tonga nidinidinika tamin'ny mponina i Rastany
Omaly alahady 31 martsa dia niaraka nifanakalo hevitra tamin'ireo solotenan'ny mponina teny Ambohipo sy Ambolokandrina ny kandida sy ireo iray lisitra aminy, avy amin'ny Tiako i Madagasikara, Randrianarisoa Stanislas na Rastany, depiote teo aloha voafidy tao Antananarivo faha-2.
Tsy nisorona ireto mponina ireto nilaza ny maharary azy ireo, sy ny fanarenana ilaina, ireo zava-bita mila tohizana, izay ny Solombavambahoaka no afaka miady izany, na amin'ny fanaovana ny Tetibolam-panjakana, na ny fanaraha-maso ny asan'ireo mpanatanteraka, na ny fampiasana ireo vola mivantana tantana'ny Solombavambahoaka momba ny fampandrosoana mivantana ny Faritra, na CLD (Comité Local pour le Développement), misy tetibola eo amin'ny 200 tapitrisa Ariary isaky ny Distrika (Isaky ny Boriboritany ho an'Antananarivo Renivohitra) hanaovana asa fampandrosoana, raha ny teti-bola farany teo.
Nisy moa ny fiaraha-misakafo ho nofo-kena mitam-pihavanana.